Antonio Conte oo ka codsaday maamulka kooxda Inter inay la soo saxiixdaan xiddig ka tirsan Arsenal – Gool FM
(MIlano) 12 Juun 2020. Wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ay xiiseeneyso inay la soo saxiixato daafaca naadiga Arsenal ee Héctor Bellerín inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in tababaraha Nerazzurri ee Antonio Conte uu codsaday heshiiska 25 jirka reer Spain, si uu ugu xoojisto daafaca kooxda Inter Milan laga bilaabo xilli ciyaareedka cusub.
Héctor Bellerín ayaa qandaraaska uu hada ku joogo kooxda Arsenal wuxuu dhamaan doonaa xagaaga 2023, maamulka Gunners ayaana qorsheenaya inay qandaraaska u kordhiyaan.
Laakiin xiddiga reer Spain ayey wararku sheegayaan inuusan dooneynin inuu sameeyo go’aan deg-deg ah, taas oo ku kalliftay maamulka Inter inay wadahadal la galaan, si ay ula saxiixdaan.
Wargayska ayaa intaas ku daray in Héctor Bellerín uu doonayo inuu qiimeeyo waxyaabaha ka dhex jira kooxda Arsenal uu hoggaamiyo macalinka cusub ee Mikel Arteta, kahor inta uusan go’aan gaarin, ee ah haddii uu sii joogayo ama uu baxayo.
Laakiin madaxda kooxda Inter Milan ayaa waxay ku dadaali doonaan sidii ay uga dhaadhicin lahayd inuu ku biiro kooxda reer Talyaani.
Wargeyska “Daily Mirror” ayaa wuxuu warbixintiisan ku soo gabagabeeyay in haddii ay Inter Milan ku guuleysato inay ku qanciso Héctor Bellerín inuu ku biro Nerazzurri ay bixin doonto qiimo 27 million pounds, si ay ula wareegto adeega laacibka reer Spain.
Liverpool oo isku diyaarineysa in Van Dijk ay ka sara mariso Maxamed Saalax